ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိသွားတဲ့ ကဗျာ
Eleven ကတော့ Eleven ပါပဲ
ကျွန်တော်ရေးထုတ်လိုက်တဲ့ စာအုပ်ကြောင့် အတော်လေး ...
သူငယ်ချင်းရေ .. ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး
ကဗျာ မဆန်တဲ့ ကဗျာ
မသေကောင်း မပျောက်ကောင်း အဘရယ်
ကျနော် ထာဝရဦးညွှတ်နေမယ့် နောက်ထပ် ကောင်းကင်
နှင်းတွေလို ... အလွမ်းတွေ စွတ်စိုတယ် ...။
Happy New year! ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:46 PM
ငါ မလေးပါဘူးလို့ ... အော်ဟစ်ရင်း
ငါ စဉ်းစားတော့တာပဲ ....။
ဟေး .... ကောင်မလေးတွေရေ ....။
ပင်လယ်ကြီး တစ်ခုပါ .....။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 1:32 PM
SUNDERLAND FREEZE CHELSEA
UNITED STUNNED BY VILLA &
ARSENAL ADVANCE TO GRAB THEIR HOPE
အဲဒါကတော့ နောက်ဆုံးထုတ် First Eleven ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးက စာသားပါ
ထူးခြားချက်ကတော့ စာလုံးတွေ အရောင်ခွဲပြီး ရိုက်ထားတာပါပဲ
အရောင်ခွဲထားတဲ့ စာလုံးတွေချည်းပဲ ပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် ဒီလိုရပါတယ် ...
ADVANCE TO GRAB THE HOPE
လို့ ဖတ်လို့ ရပါတယ် ...... ကျနော်ကတော့ ဘာသာပြန်သိပ်မကျွမ်းကျင်ပါဘူး ...
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ခုလို ဘာသာပြန်ပေးပါတယ် ...
မျှော်လင့်ခြင်းတွေကိုဖမ်းဆုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ အသေးစိတ်ပေါင်းစည်းပါ စုစည်းပါ
Eleven ကတော့ Eleven ပါပဲ ....
ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ်ရပ်အတွက် ကျနော်တို့ ဂုဏ်ယူစွာ အားပေးလိုက်ကြပါစို့ .......။ ။
ခုမှ ကော်နက်ရှင်ကောင်းလို့ en2mm7@gmail.com ရဲ့ အကူအညီကို ယူလိုက်တာကတော့ ဒီလိုရပါတယ် .....
en2mm7: EN2MM:(adj) ၁။ (က) လွတ်လပ်သော။ ပွင့်သော။ ရှင်းသော။ လွတ်သော(မငြိသော)။ လွတ်ငြိမ်းသော။(v) လွတ်လပ်(adv) အခမဲ့
en2mm7: EN2MM:(v) ပေါင်းစည်း
en2mm7: EN2MM:(n) ချီစစ်။ ချီတက်ခြင်း။ တိုးဝင်လာမှု။ ပြန့်ပွားလာမှု။ တိုးပွားမှု။ တိုးတက် လာမှု။ တိုးတက်မှု။ ကြိုတင်ပေးငွေ။ စရန်။ တိုးပေးမှု။ တိုးတက်မှု။
en2mm7: EN2MM:(vt,vi) လုယူသည်။(n) လုယူခြင်း။(v) လုယူ
en2mm7: EN2MM:(n) မျှော်လင့်ချက်။(vt,vi) မျှော်လင့်သည်။ အားထားသည်။(v) မျှော်လင့်
grab ကိုတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် သိဖူးတာက ဆုပ်ကိုင်ခြင်း ဖမ်းဆုပ်ခြင်းပါပဲ ....။ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်ကြပါတော့ဗျာ။
Labels: မျှဝေခြင်း comments (9)
Labels: ဝတ္တုတို comments (32)
တန်းစီထားတဲ့ လူတွေထဲ မကြည့်ပါနဲ့ ...
ဟိုး ... နောက်ဆုံးမှာတောင်
ကိုယ်က ရပ်ခွင့်မရှိတဲ့ ဘဝပါ ....။
စိုက်ကြည့်နေတဲ့ လူတွေထဲ မရှာပါနဲ့ ...
ဟိုး ... ချောင်ထဲကတောင်
ကိုယ်က မျှော်ခွင့်မရှိတဲ့ ဘဝပါ ....။
မင်းနဲ့ ဝေး ... ရာ ...... ထွက် ....... ပြေး .......
အား !!! ဘယ်လိုမှ မရပါဘူး ....။
အချစ်တစ်ခုပဲ မဟုတ်လားကွယ် ....
သေချာပါတယ် .... တိတ်တိတ်လေးပေါ့ .......။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:32 PM
ကျွန်တော်ရေးထုတ်လိုက်တဲ့ စာအုပ်ကြောင့် အတော်လေး ပွက်လောရိုက်သွားပါတယ်။ ကဲ့ရဲ့သံတွေ၊ ရှုတ်ချမှုတွေ၊ တွေဝေမှု၊ အံ့သြမှု၊ နားမလည်နိုင်မှုတွေ ဆူညံသွားပါတယ် ...
“အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး ... ဒါ စာပေ ဒဿနကို အရောင်ဆိုးတာပဲ ...”
“ဘယ်လိုကြီးလဲဟ ... ဒီကောင် အရူးလား? ”
တချို့ကကျ ဘာပြောရမှန်း မသိအောင်ကို ဖြစ်သွားကြပါတယ် ...
“ ......... .......... ...........”
သွက်သွက်လက်လက်ရှိတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ကတော့ အတော်လေး သည်းညည်းခံထားရတဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ ကျွန်တော့်ကို လာမေးပါတယ် ...
“ ဒီစာအုပ်ကို ဘာရည်ရွယ်ချက်၊ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့် ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်?”
ကျွန်တော် ခပ်တိုတိုပဲ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ် ...
“ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ အရမ်းလိုအပ်တဲ့ အရာတွေကို ရေးထုတ်လိုက်တာပါ ...”
ဂျာနယ်လစ်လည်း မှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့ ပြန်လှည့်ထွက်သွားတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ညီမျှခြင်းတွေက လွဲလို့ ဘာမှ ရေးမထားပါဘူး ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:17 PM
ငါ့ ရင်ခွင် အကန်းကလည်း
ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင်ကို ငေးလို့ .....။
ငါက ဘယ်မှ မသွားခဲ့သလို
သူကလည်း ဘယ်မှ မသွားခဲ့ဘူး ...
ငါက မုတ်သုံပြောင်းပြန်နဲ့ ကောင်ပါ
စိတ်တွေက လေနှင်ရာ လွှင့်လွန်းတယ် ...။
ငါ့အိပ်မက်လေးကို လွတ်ချထားလိုက်ပြီ ...။
တေးမသီတော့တဲ့ ငှက်ကလေးလို ...
ဟိုး .... ခပ်ဝေးဝေးကို
ပျံ ... သန်း .... ရင်း .......
နေတတ်သလို နေဖို့ .......။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:14 PM
Labels: ကဗျာ comments (18)
ကိုယ်စောင့်နတ်ကလေး ခါရာ နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်နေလေသည်။ အကြောင်းကတော့ သူ့သခင် နွေဆူးလင်္ကာ အပျင်းကြီး၍ ဘာစာ ဘာကဗျာမှ မရေးသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်စောင့်နတ်ကလေး ခါရာ ရေရွတ်လိုက်သည် .....
“တောက် ! ဒီလူ အပျင်းကြီးပြီး ဘာစာမှ မရေးပဲနဲ့ အဟောင်းကြီးကို အသစ်လိုလိုနဲ့ ပြန်တင်ထားတာ သူမရှက်ပေမယ့် ... ငါ ရှက်တယ်” (မှတ်ချက်။ ။ တစ်ခါတည်းပါ။ အရင်တင်ထားတဲ့ ကံကြမ္မာအတုက အဟောင်းကြီးဗျ။ ဘာမန့်မှ မရလို့ အသစ်လိုလို ပြန်တင်ထားတာ ... ဟီး ဟီး)
ဖောက်ကနဲ အသံနှင့်အတူ ခါရာ့ဘေးသို့ နတ်တစ်ပါး ပေါ်လာလေသည်။
“ ..... ..... ..... ..... ”
ခါရာ။ ။ “ဟင် ... နင် ... နင် ဘယ်လို ရောက်လာတာလဲ? သူ သူ .. မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်လာပြီလား?”
ထို ကိုယ်စောင့်နတ်မလေး၏ အမည်မှာ ဗာဒေ ဖြစ်ပါသည်။ ခါရာ့သခင် နွေဆူးလင်္ကာ၏ သူငယ်ချင်းမလေးတစ်ယောက်ကို စောင့်ရသော ကိုယ်စောင့်နတ်မလေးဖြစ်ပါသည်။
ဗာဒေ။ ။ “ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေတာလဲ? မရောက်ပါဘူးဟာ”
ခါရာ။ ။ “ဟင် ... ဒါဆို ... နင်က ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ? လေယာဉ်နဲ့လား?”
ဗာဒေ။ ။ “ဟဲ့ ... နတ်ဟဲ့ နတ် ... ဘယ်က လေယာဉ်စီးစရာ လိုမှာလဲ”
ခါရာ။ ။ “အေး ... ဟုတ်သားပဲ ... ထားတော့ဟာ နင်လာတာ ဘာကိစ္စလဲ?”
ဗာဒေ။ ။ “အောင်မယ် ... နင့်ဆီကို ငါက ကိစ္စမရှိပဲ လာရမှာလား?”
ခါရာ။ ။ “အေး ... အဲဒါတော့ ဟုတ်တယ် ... ဒါဆို ဘာကိစ္စလဲ?”
ဗာဒေ။ ။ “ငါ့သခင်မရဲ့ မွေးနေ့ နီးပြီလေ ... အဲဒါ နင့်သခင် မွေးနေ့လက်ဆောင် တစ်ခုခု ရေးရအောင် လာသတိပေးတာ”
ခါရာ။ ။ “အဲဒါ ငါသိတယ် ... သတိလည်း ရတယ် ... ခက်တာက နင့်သခင်မက ငါ့သခင်ကို စကားမပြောဘူးဟ ... အဲဒါကြောင့် ငါ့သခင်က ရေးရခက်နေတယ် ”
ဗာဒေ။ ။ “အေး ... ဟုတ်တယ် ... ဒါပေမယ့် ... မရေးလို့ မရဘူး ... ရေးကို ရေးရမယ် ... အဲဒါ နင့်မှာ ဘာအကြံရှိလဲ?”
ခါရာ။ ။ “ဒီလိုလုပ် ... အရင်ဆုံး နင့်သခင်မက ငါ့သခင်ကို စကားပြောအောင် လုပ်မယ် အဲဒါမှ ငါ့သခင်က နင့်သခင်မကို မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့ တစ်ခုခု ရေးလာလိမ့်မယ်”
ဗာဒေ။ ။ “အေးဟ ... အဲလိုပဲ ကြိုးစားကြည့်တာပေါ့”
ထို့နောက် ခါရာနှင့် ဗာဒေတို့သည် အိပ်မက်နတ်သမီးထံ သွားရောက်၍ ဗာဒေ၏သခင်မအား အိပ်မက်တစ်ခုခု ပေးရန် စီစဉ်ကြလေသည်။
အိပ်မက်နတ်သမီး။ ။ “ဘယ်လို အိပ်မက်မျိုး ပေးစေချင်လဲ?”
ဗာဒေ။ ။ “နွေဆူးလင်္ကာနဲ့ ပတ်သက်တာ တစ်ခုခုပေါ့”
အိပ်မက်နတ်သမီး။ ။ “အင်း အင်း ... ဟုတ်ပြီ ... ဒီနေ့ည ပေးလိုက်မယ်”
(ဘယ်လို အိပ်မက်လည်းတော့ ကျနော်လည်း မသိဘူး။ သူကလည်း ပြောမပြဘူး သတ်ချင်သတ်ပစ်လိုက်လို့ ပြန်ပြောတယ်ဗျ :-)
ဤသို့ဖြင့် နောက်တစ်နေ့တွင် ........
သူငယ်ချင်း။ ။ “ .............. ............ ”
နွေဆူးလင်္ကာ။ ။ “ ............... ............ .........”
သူတို့ အရင်အတိုင်း သူငယ်ချင်း အစစ်များ ပြန်ဖြစ်သွားကြလေသည် ...။
ထို့ကြောင့် နွေဆူးလင်္ကာက ထိုသူယ်ချင်းမလေးအတွက် ဤဝတ္တုအား မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ရေးပေးလိုက်လေသည်။
ဒန် တန့် တန် ...........။ ။
(မှတ်ချက်။ ။ ဆရာနီကိုရဲ၏ နတ်ငယ်အား အခြေခံပါသည်။)
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 10:33 AM
ညတစ်ည ... ကွင်းပြင်ကျယ်ထဲမှာ မိုးပေါ်ကို ခဲနဲ့လှမ်းလှမ်းပစ်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို အဘိုးအိုက နားမလည်နိုင်စွာ မေးလိုက်တယ်။
"လူကလေးရယ်... ဘာအကျိုးရှိမှာမို့ မိုးပေါ်ကို ခဲနဲ့ လှမ်းပစ်နေရတာလဲ?"
ကောင်လေးကလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးတဲ့လေသံနဲ့ ပြန်ဖြေပါတယ်။
"ကျွန်တော်က ယောက်ျားတံခွန် လူရည်ချွန်ဆိုတာမျိုးလေ ... အဲဒါ ကြယ်ကိုလှမ်းဆွတ်နေတာပေါ့ ... ရမှာပါ ..."
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ခဲတစ်လုံးပစ်အပြီး မကြာမီ ကြယ်တစ်စင်း ကြွေကျသွားသည်။ ကောင်လေးက ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့် အဘိုးအိုကို လှည့်ကြည့်ကာ ...
"မြင်လား အဘိုး ... ၊ အဘိုးက ကျွန်တော့်ကို တော်တော်အထင်သေးတာပဲ .. အင်းလေ... အဘိုးတို့ငယ်ငယ်က ကျွန်တော့်လို မတော်ကြတော့ ကျွန်တော် တော်တာကို အဘိုးတို့ ဘယ်ယုံကြည်နိုင်ပါ့မလဲ..."
ပြောပြီး ကောင်လေးလှည့်ထွက်သွားသည်။ အဘိုးအို ဆက်ပြောသော စကားကိုတော့ ကြားမသွားပါချေ။
"အင်း ... ကံကြမ္မာဆိုတဲ့ နားကန်းကောင်ကလည်း လူမိုက်ကို မြှောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ်ပေးတတ်ပါလား"။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:31 PM
ငါ့ရဲ့ ကစားပွဲတိုင်း အရှုံးတွေချည်း ထပ်ခဲ့
ဒါပေမယ့် .... အခွင့်သင့်ရင်
ဝှက်ထားတဲ့ စပိတ်တစ်ကို ထုတ်အသုံးချချင်တယ် ...
တခါတလေတော့ ပြန်ပြီး ကောက်ကျစ်သင့်တယ်လေ။
ဒီလိုနဲ့ ... လဲကျနေတဲ့အထိ
ကံဇာတာက တက်မလာဘူး .....
နောင်တတွေနဲ့ မွန်းကျပ်ဖူးပါရဲ့ ....
ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြေနေရ .....။
တကယ်ဆို ဒီနေရာက ထွက်သွားသင့်ပြီ
လောကမှာ ဘာကို ကြောက်လို့ ကြောက်ရမှန်းမသိတာ
အတ္တကြီးလွန်းတဲ့ လူတွေကို ငါမုန်းတယ်။
မှန်အမြဲကြည့်နေတဲ့ လူတွေကို ငါမုန်းတယ်။
ကယ်တင်ရှင်ယောင် ဆောင်တဲ့ လူတွေကို ငါမုန်းတယ်။
လူမဆန်တဲ့ လူတွေကို ငါ မုန်း တယ်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:59 PM
ကျနော့် မျက်စိရှေ့တင် လူတစ်ယောက် အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံရောက်သွားတယ်။ ကျနော့် ပယောဂလည်း မကင်းဘူးဆိုတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတာပေါ့။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ။
ကျုံးဘေး ၂၆လမ်း၊ အနောက်ကနေ အရှေ့ကို အသွား ၇၈လမ်းထောင့်ကျ မီးပွိုင့်မိလို့ ရပ်နေတုန်း ကျနော့်ဆိုင်ကယ်ဘေးမှာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး လာရပ်တယ်။ တောက အဘကြီးတစ်ယောက်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ တခြားဆိုင်ကယ်တွေ ကားတွေ ညာဘက် ၇၈လမ်းထဲကို ဝှီးကနဲ ဝှီးကနဲ ကွေ့မောင်း သွားကြတာပေါ့။ အဲဒီတော့ အဘကြီးက ...
“ဟ ... မီးနီနေတာတောင် ဒီကောင်တွေ မရပ်ပဲ ကွေ့သွားကြပါလား ...”
ကျနော်ကိုက မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဝင်ပြောမိတာပါ ...။
“အဲဒီလမ်းက မီးနီလည်း ကွေ့လို့ရတယ်လေ ... GIVE WAY ...”
“ဟေ ! ဟုတ်ဟ ... အဲဒါဆို ငါလည်း သွားပြီဟေ့ ...”
အံ့သြတကြီး ဝမ်းသာအားရနဲ့ ကွေ့သွားလေရဲ့။ ကျနော့်စိတ်ထဲ ထင့်ကနဲ ...။
အဲဒီနေ့ အဲဒီမီးပွိုင့်မှာပဲ အဲဒီအဘကြီးကို ပြန်တွေ့ရလေရဲ့။ ဒီတစ်ခါတော့ အရှေ့ကနေ အနောက်ကို မောင်းလာတာပါ။ ကျနော့်စိတ်ထဲ ထင့်ကနဲ ...။
ကျနော့်ဘေးကနေ အဲဒီအဘကြီး မီးနီဖြတ်မောင်ပြီး ၇၈လမ်းထဲ အကွေ့ ......
“ ဒုန်း ” ...... “ဟာ ! တိုက်ပြီဟေ့”
“ ရွှီ ” ..................
“မီးနီဖြတ်မောင်းတာ .... တိုက်ပြီဟေ့ ...”
လမ်းထဲက ထွက်လာတဲ့ ကားနဲ့ တိုက်ကြပါလေရော ....။
ကျနော် တကယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျနော်ကိုက မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဝင်ပြောမိတာကိုး ....။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 2:23 PM
Labels: ဝတ္တုတို comments (17)
သရပါ မဂ္ဂဇင်းက အယ်ဒီတာ ခေါ်တဲ့ ကြေငြာကို သဘောကျလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ The Voice ဂျာနယ်မှာ ဖတ်ရတာပါ။
သရပါ ရသ စာပေမဂ္ဂဇင်းအတွက် အမျိုးသမီး အယ်ဒီတာ ခေါ်ယူခြင်း
၁။ ရုပ်ရည် ပြေပြစ်ရမည်။
၂။ မြန်မာစကားကို ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့စွာ ပြောဆိုတတ်ရမည်။
၃။ အိမ်ထောင်မရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၄။ မည်သည့် ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွင်မှ အလုပ်လုပ်ဖူးသူ မဖြစ်စေရ။
၅။ (၁၀)တန်းအောင်ရန် မလိုပါ။
၆။ အသက် (၂၀) နှစ်မှ (၂၈) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
ကဲဗျာ မမိုက်ဘူးလား။ အတွေ့အကြုံ မလိုဘူးတဲ့။ ရှိရင်တောင် မခန့်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောဗျ။ အယ်ဒီတာတွေ ဖြစ်တဲ့ အစ်မ မနော်ဟရီတို့ အစ်မ ချောအိမာန်(မန္တလေး) တို့ ထိုင်ငိုလောက်တယ်။
စကားမစပ် အဲဒီ သရပါ မဂ္ဂဇင်းဆိုတာ သရုပ်ဆောင် သူဌေး မင်းအုပ်စိုး လုပ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းပါ။ မဂ္ဂဇင်း အသစ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်တော့ ကြိုဆိုပါတယ်။ တကယ် ရသ အစစ်တွေ ပေးနိုင်မယ့် မဂ္ဂဇင်း ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။ မိန်းကလေးအယ်ဒီတာ ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေ နဲ့ မဂ္ဂဇင်းကို ကျနော်တော့ လတိုင်း အားပေးနေပါတယ် ဟီဟိ ...။ ။
Labels: မျှဝေခြင်း comments (17)
ရွက်လှေတချို့ ။ ။
ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ (မေ၊ ၂၀၁၀)
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:25 PM
Labels: မျှဝေခြင်း comments (5)
အမှန်တရားနဲ့ ပွေ့ဖက်ထားသူသာ ...
...... ဖြစ်ရဲ့ ........။
ဘယ်လောက်လဲ ? .........။
တစ်စစီ လိုက်ကောက်ဖူးတယ် ...
တစ်ကောက်စီ လိုက်စုဖူးတယ် ...။
ကိုယ့်တူ ကိုယ့်သား အရွယ်က
ဟုတ်ကဲ့လို့ ... မပြောတော့ဘူးဗျာ .......။
ပလေတိုးရဲ့ ဂန္တဝင်သာလိကာ ...
ထာဝရ ... ပျံသန်းသွားတော့တယ် ...။ ။
( ၂၁.၃.၂၀၁၀ နေ့က ကွယ်လွန်သွားသော ဆရာ မာန်မြင့် သို့ အမှတ်တရ ...)
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:02 PM